Akụkọ - Hebei Lubang Carbon Products Co., Ltd. ka enyere onye nlere ruru eru nke Baosteel Union Steel.
Hebei Lubang Carbon Products Co., Ltd. e nyere ndị ruru eru soplaya nke Baosteel Union Steel.
HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD nyere ndi ruru eru nke baogang united steel n'ihi mmekorita di nma na ezigbo mma nke gradite electrode na njem, 2020.
Otu Baogang hibere na 1954, bu isi ihe eji emeputa ihe na china na ebe ndi ozo n'uwa di egwu n'uwa. o nwere ụlọ ọrụ abụọ edepụtara, mongolia baotou steel union co., ltd na mongolia baotou nchara nke na-adịghị ahụkebe ala hi-tech co, ltd, nwere akụnụba karịrị ijeri yuan 160 ($ 24.11) na 2015.
Otu Baogang dị na mpaghara bayan obo mining, ebe achọtara 175 ụdị mineral na ụdị 71 dị iche iche. ihe bụ ihe ọzọ, ndị district nwere ndị kasị ibu obere ụwa idobere na nke abụọ kasị ukwuu niobium idobere n'ụwa nile.
Otù Baogang na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke ígwè, ụwa na-adịghị ahụkebe, ịnweta, na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-abụghị nchara, dị ka nrụpụta akụrụngwa, ịrụ ọrụ injinia na nhazi nri nri. o guzobewo ngalaba na mpaghara iri na atọ na ọtụtụ ọfịs na United States na mongolia.
Otu Baogang dị na mpaghara mongolia kwụ ọtọ, nke jikọtara ya na mpaghara ugwu na akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke china, n'akụkụ mongolia na russia. ọ nwere uru dị na ụwa, kol, ígwè, mmiri na ọkụ eletrik.
N'okpuru mmekọrịta ka mma na nchara baogang, hebei rubang carbon rpoducts co., Ltd. na-aga n'ihu na-enye ezi prodcust aand na-ewetara ndị ọzọ nchara ahịa ndị ọzọ nchara ahịa ma anụ ụlọ nke china na esenidụt & n'ụwa nile inclduing phillipines, malaysia, taiwan, toki, ploland, Russia, spain, uae., argentia, india, italy,; anụ ụlọ ígwè dị ka: rizhao steel ejide otu co., ltd., china steel coporations, fujian sangang (otu) co., ltd., panzhihua steel vanadium co., ltd., laiwu branch iron & steel co., ltd of shandong iron & ígwè gorup co., ltd.
onye ruru eru tozuru oke putara site na baogang united steel na march 16, 2020 dika n’okpuru:
Post oge: Dec-28-2020